﻿feel Baro Muhiimada Ee Leyihiin
Ka Fogoow Subaga Iyo Buruurta: Ka awoodo inaad cunto baruurta hilibka, Isku inaad yarayso cuntada leh markastood soo iibsanayso eeg inta subag ku jirta, caanaha subaha miirayna cab. Daawada afka laga qaato steroids keena waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la isticmaala oo markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Dawaada laga qaato steroids wuxuu waxyeelayn sidaas awgeed waxaa la isticmaala oo markii ay daawaynada kale la tijaabiyay. Cabo sigaar is aged by haddii carruurta lagu, waxay halis saa'id ah ku jiraan neef. Ogow kugu kiciyo adigoo markii neefsashadaada sii xumaatey, ama adigoo qalabka cabbiraadka neef-baxsiga dheer markii aad raashin cunto qaadato daawo oo aad malayso inuu kugu neefta.
Si aad u samaysid waxaa lagaaga baahan yahay inaad cunto caafimaad leh iyo inaad si ah u jimicsi that is samaysid. Inkastoo oo halis keeni karo, haddii aad qabtid neef aad u xun, waa inaad qaadatid tallal sanadeedka ifilada (durayga). Waa inaad xitta qaadataa tallaalka ka hortagga pneumococcal - oo oh jeermis keena xanuunka sambabaha (pneumonia), meningitis iyo bukashada dhiigga.
Qayb ka mid oh neeftaada ogaashada kicin iyo in laysku dayo in fogaado. Tijaabada PEFR waxaa lagu isticmaalaa qalab yar ee gacanta lagu qabto ee lagu magacaabo cabbiraha neef-baxsiga ugu dheer (peak flow meter) oo cabbiraayo inta ay tahay hawada aad ka saari karto sambabahaaga. Waxaa akhrin doonaa natijada cayilka tijaabada kadibna waxaa lagu siin daawo oo feel- u leh gaaban that is waqti. Waxaa ka soo boodidda lagu daawayn karaa iyada oo la kordhiyo xisaabta qaadanaayo beta2 -agonists.